Daawooyinka Guryaha Ugufiican ee Saxarada | Ragga Stylish
Xaqiiqdii dad badan ayaa ku dhaca nooc ka mid ah calool fadhiga. Calool fadhiga waxaa badanaa keena caadooyin xun xun, jimicsi jireed iyo mid cunto. Waxaa jira dad sameeya hal saxarood maalintii oo keliya waana in kabadan inta kufilan. Dadka kale ee leh cunno ay hodan ku tahay fiberka oo sameeya jimicsi jireed sida ay u kala heer iyo yool yihiin waxaa laga yaabaa inay yeeshaan wax ka badan 3 saxarood maalintii. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dad kale oo laga yaabo inay dhibaato ku qabaan iyaga. Sidaa darteed, waxaan siin doonaa xoogaa daaweynta guriga ee calool istaagga.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato daaweynta guriga ugu fiican ee calool istaagga, kani waa boostadaada.
1 Maxay calool fadhigu u dhacdaa?
2 Daaweynta guriga ee calool fadhiga
3 Daaweynta phytotherapy ee daaweynta guriga ee calool istaagga
4 Sidee looga hortagi karaa calool fadhiga
Maxay calool fadhigu u dhacdaa?
Waxaa jira dad leh dhibaatooyin calool fadhiga oo aan lahayn nooc cudur ah. Dhibaatooyinkan waxaa badanaa lala xiriiriyaa jimicsi la’aan iyo cunno dufanka yar. Waxa ugu muhiimsan ee qofka ku saabsan ayaa ah inuu maamuli karo inuu musqusha aado isagoo xaalad wanaagsan ku sugan oo noqon kara mid wacan oo aan dhibaato caafimaad u keenin. Tan awgeed, waxaa muhiim ah inaad haysato joogtayn joogto ah. Haddii aysan sanad ku dhaafin maalin walba, waa suurtagal in calool fadhido.
Sababaha ugu waaweyn ee calool istaagga ayaa noqon kara kuwa soo socda:
Guul darrooyinka cuntada: Cuntada waxaa laga yaabaa inay ka maqnaato cuntooyinka hodanka ku ah faybarka, nafaqooyin faqiir ah oo aad ufiican oo aad loo safeeyey, ama dheecaan la'aan.
Dhaqdhaqaaqa jirka: dadka fadhiya oo jimicsi yar sameeya. Iyaguna waa kuwa beenta ama fadhiista inta badan. Si ay u jirto marin wanaagsan oo xiidmaha ah, dhaqdhaqaaq jireed ayaa loo baahan yahay.
Cilladaha dheef-shiid kiimikaadka waxaa jira dad la ildaran Hypokalemia, hyperglycemia, porphyria, amylosis
Ciladaha hormoonnada: Hypothyroidism, hypercalcemia, panhypopituitarism, pheochromocytoma, iyo kuwo kale
Isbedelada dhismaha: waa inay ku xirnaadaan cudurada ku dhaca xiidmaha, sida saxarada xanaaqa, burooyinka, dhibaatooyinka neerfaha iyo maskaxda, iwm.
Sababaha kale kuwani waxay noqon karaan cuncunyo badan oo soo noqnoqda iyo soo-gaadhista xubnaha jidhka
Haddii qof ay ku adag tahay inuu aado musqusha, waa inuu falanqeeyo waxa sababi kara. Si kastaba ha noqotee, haddii ay dhibaatooyin yihiin laakiin ay u baahan yihiin nooc kasta oo fara-gelin caafimaad ah, waxaad u isticmaali kartaa daawooyinka guriga ee caloosha caloosha. Aan aragno maxay yihiin daaweynta guriga ee ugu weyn ee calool istaagga.
Waxa ugu horreeya waa in la falanqeeyo cuntada. Cunnadu waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee keena calool istaagga. Caadi ahaan, dadku ma raacaan cunto ay ku badan tahay fiberka, laakiin halkii xadgudubyada badeecada la warshadeeyay. Cuntooyinkan ayaa u muuqda kuwo ku yar nafaqooyinka muhiimka ah iyo sonkorta badan. Tan waxaan ku darnaa dhaqdhaqaaq jireed oo hooseeya iyo qaab nololeed joogto ah oo deggan.
Muuqaal kale oo aasaasi ah ayaa ah fuuq-baxa. Si qashinka si habsami leh ugu dhex dhaqaaqo jirka iyo mindhicirka oo dhan, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u qoyaan. Haddii aan u nugul nahay dhibaatooyinka calool fadhiga, waxaa ugu wanaagsan in aan si joogto ah u cabno biyaha, xitaa haddii aynaan harraad lahayn.
Waxaa jira xoogaa cunno ah badan oo lagula taliyay inaad iska ilaaliso calool fadhiga oo aad ku darto cuntada. Cuntooyinkani waxay hodan ku yihiin faybar waxayna leeyihiin nafaqooyin badan sida macdanta iyo fiitamiinnada. Waxaan helnaa noocyo kala duwan oo miro iyo khudrad ah, miraha isku dhan, iniinyaha, qolofka abuurka iyo waxyaabo lagu daro sida alginate, acacia, carrageenan iyo guar.
Haddii aad leedahay dhibaato cad oo caloosha oo joogto ah iyo mid daran, isticmaal enemas. Ha u isticmaalin inay lagama maarmaan tahay mooyee. Mid kale oo ka mid ah daaweynta guriga ee calool istaagga ayaa ah in la duugo caloosha dhowr saacadood ka dib markii la cunay cuntadii ugu dambeysay. Way fiicantahay in aad cabto hal koob oo biyo ah si aad awood ugu yeelatid inaad dheecaanka saxarada bolus dareerto. Duugistaan ​​laguma talinayo haweenka uurka leh haddii aad la kulanto nooc xanuun ah.
Daaweynta phytotherapy ee daaweynta guriga ee calool istaagga
Waxaa jira dad si xun u isticmaala walxaha wax lagu nadiifiyo. Kuwaani sida caadiga ah waxaa laga soo diyaariyaa geedo firfircoon sababo la xiriira maadada anthraquinone. Diyaargarowga dhirta ayaa sida caadiga ah leh saliid castor, adobe husk, cascara sagrada, iyo kuwo kale. Dhibaatada ay leedahay purgatives-ka ayaa ah in qadar xad dhaaf ah ay u horseedi karto daadgureyn joogto ah oo ay weheliso calool xanuun iyo boosas dhiig leh. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad la tashato dhakhtar haddii aad isticmaali doontid walxaha nadiifinta oo aadan si joogto ah u qaadan.
Waxaa jira daraasado qaarkood oo is khilaafsan oo ku saabsan daaweynta jirka. Tani waa geedi socod lagu awood u yeelan karo in lagu nadiifiyo xiidanka oo dhan, ma aha oo kaliya qeybta hoose sida kuwa sameeya ay sameeyaan, laakiin gebi ahaanba. Tan waa in lagu sameeyaa oo keliya waqti ku habboon haddii ay dhacdo carqaladeyn iyo shaqaale diyaar u ah inay sameeyaan.
Marka la eego daawada dhirta sida daaweynta guriga ee calool istaagga waxaan helnaa geedka loo yaqaan 'plantain'. Plantain-ka waxaa ku jira mucilage taas waxay awoodaan inay ilaaliyaan xuubka xiidmaha. Waxaa loo isticmaalaa faleebo waxaana la qaadaa marka biyuhu noolyihiin si looga soo kabto xabka xiidmaha. Daawayn kale waa in la qaato qolofta abuurka psyllium. Abuurkani wuxuu kordhiyaa xajmiga saxarada. Waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato hal ama laba qaaddo shaah ah oo isku milmay koob biyo ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad uqaadatid cuntada kadib saameyn weyn.
Sidoo kale waad qaadan kartaa galleyda oo dhan maadaama ay qani ku tahay fiber-ka la milmi karo waxayna caawineysaa in la xakameeyo socodka xiidmaha. Waa in maskaxda lagu hayaa in galleyda oo dhan ay yihiin dalag aad u dheregsan waxaana lagu iibiyaa qaab dhegaha, bur, miraha iyo semolina.
Sidee looga hortagi karaa calool fadhiga
Marka laga reebo inaad haysato dawooyin kala duwan oo guriga loogu talagalay caloosha, waxaa ugu wanaagsan in la barto sida looga hortago Muhiimadu waa in laga takhaluso sababaha keena si aan mar labaad loo helin. Waxaan sameyn karnaa waxyaabaha soo socda:
Cun cuntadaada inbadan
Aan caburin rabitaanka saxarada
Cunto cunno hodan ku ah fiber, oo leh faakiho faro badan iyo khudrad
Biyo cab markasta oo aad harraadsan tahay
Haddaan musqusha aado waqti isku mid ah maalin kasta
Samee jimicsi jireed. 20 daqiiqo maalintii 3 seddex jeer usbuucii ayaa ku filan.
Ha isticmaalin qalabka wax lagu nadiifiyo illaa loo baahdo.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto waxyaabaha ku saabsan daaweynta guryaha ee kala duwan ee caloosha istaagta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Daaweynta guriga ee calool fadhiga